छोटकरीमा : बर्डफ्लु देखियो, कुखुराको मासु-अण्डा कसरी खाने?
नेपालमा बर्डफ्लु भित्रिएसँगै उपभोक्तालाई लागेको छ, अब कुखुराको मासु खान हुँदैन। उपभोक्ता मात्र होइन कुखुरापालक किसान पनि कुखुरा बिक्दैन, व्यवसाय डुब्छ भन्ने चिन्तामा छन्। बर्डफ्लु भित्रियो भन्दैमा कुखुराको मासु नै खान नहुने भन्ने होइन। सुरक्षित तरिकाले पकाएर खान हुने चिकित्सकहरूको सुझाव छ।
'बर्डफ्लु भाइरस ७० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा मर्छ। हामीले १०० डिग्री सेल्सियसमा पकाउँदा यदि भाइरस छ भने पनि खतरा हुँदैन। पोलेको मासु खानुपरे समय लगाएर भित्रैसम्म पकाउनुपर्छ। बाहिर पाकेजस्तो देखिए पनि पोल्दा काँचो रहने सम्भावना हुन्छ। नपाकेको जस्तो लागे खानु हुँदैन।'
बर्ड फ्लुबाट कसरी बच्न सकिन्छ ?
हेल्थ टिप्स: बर्ड फ्लू के हो ? यसका लक्षण कस्ता हुन्छन् र कसरी बच्न सकिन्छ?
'फार्ममा काम गर्ने व्यक्ति, ढुवानीकर्ता र मासु काट्ने मान्छे भने सबभन्दा जोखिममा रहेको उनी बताउँछन्। उनीहरूले सुरक्षित रूपमा मास्क, पञ्जा र एप्रोन लगाएर काम गर्नुपर्ने साथै बजारबाट मासु किनेर पकाउने व्यक्तिले अनिवार्य साबुन पानीले हात धुनुपर्छ।'
काठमाडौंमा कसरी देखियो बर्डफ्लु?
काठमाण्डौको तारकेश्वर नगरपालिकामा पालेका टर्की र हाँसमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएसँगै रोग अन्यत्र फैलन नदिन सरकार क्रियाशील देखिएको छ। रोग देखा परेको क्षेत्रलाई निसङ्क्रमण गरिसकेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ । 'बर्ड फ्लुलाई लिएर नेपालको पछिल्लो अवस्था कस्तो देखिएको छ ?' यसबारे छोटकरीले तयार पारेको यो सामग्री पढ्नुहोस्।
छोटकरीमा : नेपालमा बर्ड फ्लू ?
www.xotkari.com3 महिना पहिले